wordpress | MyanmaPress Blogging Platform
Using Export & Import
Leaveareply ကျွန်​ေတာ်​တို့​လို ဒီ​က​ဆိုဒ်​ကို ဟို​ေရွှ့၊ ဟို​က​ဆိုဒ်​ကို ဒီ​ေရွှ့​နဲ့ လူ​ေတွ​အ​တွက် ေရး​ထား​သ​မျှ​စာ​ေတွ​ကို တ​ပုဒ်​ချင်း​စီ ြပန်​ကူး​ရ​ြခင်း​မှ လွတ်​ကင်း​ေအာင် WordPress မှာ Import နဲ့ Export ဆို​တဲ့ စ​နစ်​ေတွ ထည့်​သွင်း​ေပး​ထား​ပါ​တယ်။ ၎င်း​စ​နစ်​ေတွ​ကို အ​သံုး​ြပု​ြခင်း​အား​ြဖင့် လွယ်​ကူ​ြမန်​ဆန်​ြပီး ပို့​စ်​ေတွ​ကို ြပန်​ကူး​ရ​တဲ့​ဒုက္ခ၊ ကူး​ထား​တဲ့​ဟာ​ေတွ​ကို ြပန်​တင်​ရ​တဲ့ ဒုက္ခ​က​ေန ကင်း​ေဝး​ေစ​မှာ​ပါ။ WordPress ကို Localhost မှာ​စမ်း​သပ် တင်​ထား​ြပီး၊ တ​ကယ်​အွန်​လိုင်း​ေပါ်​ကို​တင်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ​လည်း ြပန်​ကူး​တင်​စ​ရာ​မ​လို​ပဲ အ​ဆင့်​ေလး အ​နည်း​ငယ်​ြပု​လုပ်​ရံု​ြဖင့် အ​လွယ်​တ​ကူ​ပဲ တစ်​ဖက်​နဲ့ တစ်​ဖက် လွှဲ​ေြပာင်း​နိုင်​မှာ​ပါ။
ယ​ခု ကျွန်​ေတာ်​တို့ Blog က​စာ​ေတွ​ကို Export က​ေန Download လုပ်​ြကည့်​ရ​ေအာင်။
မိ​မိ WordPress ဆိုဒ်​ကို Login ဝင်​ပါ။ ၎င်း​ေနာက် Dashboard ကို​ေရာက်​လျှင် Tools ေအာက်​မှ Export ကို နှိပ်​ပါ​က Export စာ​မျက်​နှာ​သို့ ေရာက်​လို့ လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
Export မှာ All content , Posts , Pages ဆို​ြပီး ေရွး​ချယ်​စ​ရာ သံုး​ခု ပါ​ပါ​တယ်။ ၎င်း​သံုး​ခု​က​ေတာ့ မိ​မိ Download ချ​ချင်​တဲ့ အ​ပိုင်း​ေတွ​ကို ေရွး​ချယ်​ခိုင်း​တာ​ပါ။
All content က​ေတာ့ ေရး​ထား​သ​မျှ အ​ကုန်​လံုး​ကို မှတ်​ချက်​ေတွ​က​အ​စ Download လုပ်​ေပး​မှာ​ပါ။ ကျွန်​ေတာ်​က​ေတာ့ ဆိုဒ်​တစ်​ခု​လံုး ေြပာင်း​မှာ ြဖစ်​တဲ့​အ​တွက် All content ကို​ပဲ ေရွး​ပါ​တယ်။
အ​ကယ်​၍ ပို့​စ်​ေတွ​ကို​ေရွး​ထုတ်​ြပီး​မှ ယူ​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​ေတာ့ Post ကို​ေရွး​လိုက်​ပါ။ Post မှာ​ေတာ့ ကဏ္ဍ​အ​လိုက်၊ ေရး​သား​ခဲ့​တဲ့​သူ​အ​လိုက်၊ ရက်​စွဲ​အ​လိုက်​နဲ့ Status ဆို​တဲ့ ေဖာ်​ြပ​ြပီး​သား စာ​မူ​ေတွ​လား၊ သိမ်း​ထား​တဲ့ စာ​မူ​ေတွ​လား၊ လျှို့​ဝှက်​ထား​တဲ့​စာ​မူ​ေတွ​လား ဆို​တာ​ကို​ေရွး​ြပီး Download လုပ်​နိုင်​ပါ​တယ်။
Pages ကို​ေရွး​မယ်​ဆို​ရင်​ေတာ့ စာ​ေရး​သူ​အ​လိုက်၊ ရက်​စွဲ​အ​လိုက်​နဲ့ Status အ​တိုင်း​ေရွး​ြပီး​ေတာ့ Download Export File ကို​နှိပ်​ြပီး Download လုပ်​နိုင်​ပါ​တယ်။
ရ​လာ​တဲ့ ဖိုင်​က​ေတာ့ xml format နဲ့​ရ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ Download လုပ်​ြပီး​သွား​ြပီ​ဆို​ေတာ့ ကို​ထည့်​ချင်​တဲ့​ေန​ရာ​မှာ ြပန်​သွင်း​ဖို့​ပဲ ကျန်​ေတာ့​တာ​ေပါ့။
မိ​မိ​ေြပာင်း​ထည့်​လို​တဲ့ WordPress ဆိုဒ်​ကို ဝင်​ပါ။ ၎င်း​ေနာက် Tools ေအာက်​မှ Import ကို​သွား​ပါ။ Import မှာ​ေတာ့ WordPress မ​ဟုတ်​ပဲ အ​ြခား​နည်း​စ​နစ်​ေတွ​က​ေန​လည်း သွင်း​လို့​ရ​တာ​ေတွ​ကို ေတွ့​ရ​မှာ​ပါ။
ဥ​ပ​မာ- Blogger က​ေန WordPress ေြပာင်း​မယ့်​သူ​ေတွ​အ​တွက် အ​ဆင်​ေြပ​တာ​ေပါ့။ Blogger မှာ​လည်း စာ​ေတွ​ကို Export လုပ်​တဲ့ စ​နစ်​ပါ​ပါ​တယ်။ တ​ခု​ရှိ​တာ​က Blogspot က​ေန WordPress ေြပာင်း​မယ်​ဆို​ရင်​ေတာ့ Blogger to WordPress ကို​သံုး​ြပီး xml ဖိုင်​ကို Convert လုပ်​ေပး​တဲ့​တစ်​ဆင့် လို​ပါ​တယ်။
ကဲ . . ခု​န​က Download လုပ်​ခဲ့​တဲ့ ဖိုင်​ကို ြပန်​ထည့်​ြကည့်​ရ​ေအာင်။ WordPress ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ Pop-up Box နဲ့ File ကို Upload လုပ်​ဖို့ ေပါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ခု​န​က Download လုပ်​ခဲ့​တဲ့ File ကို​ေရွး​ေပး​ြပီး Upload လုပ်​လိုက်​ပါ။
(​အ​ကယ်​၍ ၎င်း​ေန​ရာ​မှာ ေအာက်​က ပံု​အ​တိုင်း Error တက်​လာ​ခဲ့​ရင်​ေတာ့ WordPress Importer ဆို​တဲ့ Plugin ကို အ​ရင်​ဆံုး ထည့်​သွင်း​ထား​ဖို့ လို​အပ်​ပါ​တယ်။
Error မ​တက်​ခဲ့​ရင်​ေသာ်​လည်း​ေကာင်း (​သို့​မ​ဟုတ် WordPress Importer ကို​ထည့်​ြပီး​၍ ေသာ်​လည်း​ေကာင်း Upload လုပ်​ဖို့ Browse ဆို​ြပီး ဖိုင်​ေရွး​ခိုင်း​ေန​ြပီ​ဆို​ရင်​ေတာ့ အ​ခု​န​က Download ချ​ထား​တဲ့ xml ဖိုင်​ကို စက်​ထဲ​က​ေန ေရွး​ြပီး Upload file and import ကို နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ေအာက်​က ပံု​စံ​မျိုး ေပါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
အ​သစ်​ြပန်​ထည့်​လိုက်​တဲ့ စာ​မူ​ေတွ​အ​တွက် ဘယ်​သူ​က ေရး​တယ်​ဆို​တာ​ကို သတ်​မှတ်​ခိုင်း​ြခင်း​ပဲ ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ဘာ​မှ မ​ေရွး​ပဲ Submit ပဲ နှိပ်​မယ်​ဆို​ရင်​ေတာ့ လက်​ရှိ​အ​သံုး​ြပု​ေန​တဲ့​သူ​အ​မည်​နဲ့ ဝင်​သွား​မှာ ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် အ​ြခား အ​သံုး​ြပု​သူ အ​မည်​ေတွ​နဲ့ လို​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​ေတာ့ assign posts to an existing user မှာ ရှိ​ြပီး​သား အ​သံုး​ြပု​သူ​ေတွ​ထဲ​က မိ​မိ ထည့်​ေပး​လို​တဲ့ အ​မည်​ကို ေရွး​ေပး​ရ​ပါ​တယ်။ အ​သံုး​ြပု​သူ အ​သစ်​အ​မည်​နဲ့ ဝင်​သွား​ချင်​ရင်​ေတာ့ create new user with login name မှာ အ​မည်​အ​သစ်​ေပး​ြပီး Submit ကို​နှိပ်​ေပး​နိုင်​ပါ​တယ်။ ၎င်း​အ​သံုး​ြပု​သူ အ​သစ်​ရဲ့ user’s details ကို​ေတာ့ Users ထဲ​မှာ သွား​ြပီး ြပင်​ဆင်​နိုင်​ပါ​တယ်။
Submit လုပ်​လိုက်​ရင်​ေတာ့ Data ေတွ​ထည့်​ေန​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ထည့်​ြပီး​သွား​ရင်​ေတာ့ All done. Have fun! ဆို​ြပီး ေပါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ပို့​စ်​ေတွ​ကို လွှဲ​ေြပာင်း​ြခင်း ေအာင်​ြမင်​သွား​ပါ​ြပီ။
This entry was posted in wordpress on August 31, 2012 by Nwe Yoe. ဧ​ရာ ဝက်ဘ် ကစ် (Ayar Web Kit)
Leaveareply ဧ​ရာ ဝက်ဘ်​ကစ်​ကို ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ် အ​ဓိ​က အ​သံုး​ြပု​ေသာ ဆိုဒ်​များ​အ​တွက် ရည်​ရွယ်​ြပု​လုပ်​ထား​ြခင်း​ြဖစ်​သည်။ ဧ​ရာ ဝက်ဘ်​ကစ်​တွင် ဧ​ရာ ယူ​နီ​ကုတ်​နှင့် ေဇာ်​ဂျီ​ေဖာင့်​တို့​ကို အ​ြပန်​အ​လှန် ေြပာင်း​လဲ​ေပး​နိုင်​ေသာ ကွန်​ဗက်​တာ၊ ဧ​ရာ ယူ​နီ​ကုတ်​ကို ကွန်​ြပူ​တာ​တွင် ထည့်​သွင်း မ​ထား​ေသာ်​လည်း မှန်​ကန်​စွာ​ဖတ်​ရှု ေရး​သား​နိုင်​ေသာ ေဖာင့်​ြမှုပ်​သွင်း​ြခင်း​နှင့် စာ​ရိုက်​စ​နစ် တို့​အား ထည့်​သွင်း​ေပး​ထား​သည်။ ထို့​ြပင် အယ်​ဒီ​တာ​အ​တွင်း​သို့ ေန့​စွဲ၊ အ​ချိန် စ​သည်​တို့​ကို ြမန်​မာ​ဘာ​သာ​ြဖင့် အ​လွယ်​တ​ကူ ြဖည့်​သွင်း​နိုင်​ရန် ခ​လုပ်​များ ထည့်​သွင်း​ေပး​ထား​သည် ဧ​ရာ စာ​ရိုက်​စ​နစ် လက်​ကွက် အ​ထား​အ​သို​များ​အား မ​သိ​ရှိ​သူ​များ​အ​တွက် လက်​ကွက်​န​မူ​နာ​ပံု​စံ​များ​ကို အ​လွယ်​တ​ကူ ဖွင့်​လှစ်​ြကည့်​ရှု​နိုင်​ေသာ ခ​လုပ်​ကို ထည့်​သွင်း​ေပး​ထား​သည်။ မှတ်​ချက်​ေပး​ရန်​ေန​ရာ​တွင် အယ်​ဒီ​တာ​ထည့်​သွင်း​ေပး​ထား​ြပီး ဧ​ရာ​စာ​လံုး​များ​ကို လွယ်​ကူ​စွာ ဖတ်​ရှု ရိုက်​နှိပ်​နိုင်​သည်။ ထို့​ြပင် ဆိုဒ်​တစ်​ခု​လံုး​ရှိ စာ​ရိုက်​သွင်း​ရ​ေသာ ေန​ရာ​အား​လံုး​တွင် စာ​ရိုက်​စ​နစ်​အ​တွက် လက်​ကွက်​ကို ထည့်​သွင်း​ေပး​ထား​သ​ြဖင့် မည်​သည့် အ​ချိန်​တွင်​မ​ဆို လွယ်​ကူ​စွာ ြမန်​မာ​စာ​ကို ရိုက်​နှိပ်​နိုင်​မည်​ြဖစ်​သည်။ ဧ​ရာ ဝက်ဘ်​ကစ်​ကို http://wordpress.org/extend/plugins/ayar-web-kit/ တွင် ရ​ယူ​နိုင်​ပါ​သည်။ အ​ြကံ​ြပု​မှု​များ​ကို ြကို​ဆို​ပါ​သည်။ မှတ်​ချက်​ေပး​၍ အ​ြကံ​ြပု​ချက်​များ ြပု​လုပ်​ေပး​နိုင်​ပါ​သည်။
This entry was posted in plugins, wordpress on February 27, 2011 by mmpressadmin. Plugin ဘာ​သာ​ြပန်
Leaveareply Plugins ေတွ​ဟာ​လည်း Themes ေတွ​လို​ပဲ ဘာ​သာ​ြပန်​ကိစ္စ​ကို သီး​ြခား​လုပ်​ရ​ပါ​မယ်။ Plugins ေတွ​ကို ဘာ​သာ​ြပန်​နည်း​ကို​လည်း သီး​ြခား ေဖာ်​ြပ​ေပး​သွား​မှာ​ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​မှာ တစ်​ချို့​တစ်​ဝက် ေတာ့ ဘာ​သာ​ြပန်​ထား​ပါ​တယ်။
This entry was posted in plugins, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်​ကိ​စ္စ​များ​and tagged internationalization, localization, plugins, translation, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်, ြမန်​မာ​လို on November 21, 2010 by mmpressadmin. Theme ဘာ​သာ​ြပန်
Leaveareply Themes ေတွ​ဟာ WordPress.Org က​ထုတ်​ထား​တာ​မ​ဟုတ်​ဘဲ အ​ြခား WordPress Package ကို သံုး​တဲ့​သူ​ေတွ​က မိ​မိ​စိတ်​ြကိုက် ေရး​ထား​ြက​တာ​ြဖစ်​လို့ Theme တိုင်း​ဟာ Internationalization လုပ်​မ​ထား​သ​လို Localization လုပ်​လို့ မ​ရ​ပါ​ဘူး။ အဲ​ဒါ​ေတွ​လုပ်​ချင်​ရင် တစ်​ချို့ Internationalization လုပ်​ြပီး​သား​ေတွ အ​တွက် Localization လုပ်​ရ​တာ မ​ခက်​ေပ​မယ့် Internationalization မ​ပါ​တဲ့ Theme ေတွ​ကို​ေတာ့ ကိုယ့်​ဘာ​သာ​ြပန်​ြပင်​ရ​မှာ​ြဖစ်​ပါ​တယ်။ အ​ြကမ်း​ဖျဉ်း​အား​ြဖင့် Internationalization ဆို​တာ ကိုယ်​ထုတ်​တား​တဲ့ Software တစ်​ခု​ကို အ​ြခား နိုင်​ငံ​ြခား​ဘာ​သာ​ေတွ​နဲ့​ပါ သံုး​လို့​ရ​ေအာင်​လုပ်​ထား​တာ​ကို ဆို​လို​ြပီး၊ Localization ဆို​တာ​က အ​ြခား​နိုင်​ငံ​ြခား​ဘာ​သာ​တစ်​ခု​ခု​နဲ့ ရှိ​ေန​တဲ့​ဟာ​ကို ကိုယ့်​ဘာ​သာ​စ​ကား​နဲ့ သံုး​လို့​ရ​ေအာင်​လုပ်​တာ​ကို ဆို​လို​ပါ​တယ်။ Theme ေတွ​ကို Internationalization လုပ်​နည်း​နဲ့ Localization လ​လုပ်​နည်း​ကို ေနာက်​ပိုင်း​မှာ ဆက်​လက် ေဖာ်​ြပ​ေပး​သွား​မှာ ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ေလာ​ေလာ​ဆယ် ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​မှာ Theme အ​များ​စု​ကို Localization လုပ်​မ​ထား​ရ​ေသး​ပါ​ဘူး။ တစ်​ချို့​ဆို Internationalization လုပ်​ဖို့​ပါ​လို​ေန​ပါ​ေသး​တယ်။ ကျွန်​ေတာ်​တို့​မှာ လူ​အင်​အား​နည်း​ေန​တဲ့ အ​တွက် အဲ​ဒါ​ေတွ​ကို​ေနာက်​ပိုင်း​မှ ြဖည်း​ြဖည်း​ြခင်း​ပဲ လုပ်​သွား​ဖို့ ြကံ​ရွယ်​ထား​ပါ​တယ်။ ဘ​ေလာ့​ဂါ​ေတွ​ထဲ​က ဒီ​အ​ပိုင်း​ကို စိတ်​ဝင်​စား​တဲ့​သူ​ေတွ​ရှိ​လို့ ပါ​ဝင် လုပ်​ေဆာင်​လို​တယ်​ဆို​ရင် လက်​ခံ​ဖို့ အ​သင့်​ပါ။ လို​အပ်​တာ​ေတွ​ကို ကူ​ညီ​ေပး​သွား​မှာ ြဖစ်​ပါ​တယ်။ တ​ကယ်​လို့ မိ​မိ သံုး​တဲ့ ဘ​ေလာ့​ဂ် Theme မှာ ြမန်​မာ​လို​မ​ေပါ်​ဘဲ အဂင်္​လိပ်​လို ေပါ်​ေန​တဲ့ ေန​ရာ​ေတွ​ရှိ​ေန​တယ်​ဆို​ရင် ဆက်​သွယ်​ြပီး ဘ​ေလာ့​ဂ် အ​မည်​နဲ့ Theme အ​မည်​ကို ေဖာ်​ြပ​ြပီး သ​တင်း​ပို့​ေစ​လို​ပါ​တယ်။ ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ကိုယ်​တိုင် ဘာ​သာ​ြပန်​ဖို့ စိတ်​ဝင်​စား​ရင်​လည်း လုပ်​ရ​မယ့်​နည်း​လမ်း​ေတွ​ကို ေြပာ​ြပ​ေပး​မှာ ြဖစ်​ပါ​တယ်။
This entry was posted in themes, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်​ကိ​စ္စ​များ​and tagged internationalization, localization, Theme, translation, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်, ြမန်​မာ​လို on November 21, 2010 by mmpressadmin. Search for: